Consiglio del giorno 19 Settembre 2020 di San Basilio | Ilblogdellapreghiera
Kansụl nke ụbọchị 19 Septemba 2020 nke San Basilio
Paolo Tescione	Edere ya Septemba 19, 2020 Septemba 19, 2020
San Basilio (ihe dị ka 330-379)
onye mọnk na bishọp nke Caesarea na Cappadocia, dọkịta nke Church
Ezigbo ụlọ 6, na akụ na ụba; NG 31, 262ss
"Ọ mịrị otu narị okpukpu"
Are bụ ohu nke Chineke dị nsọ, onye na-elekọta ndị ohu ibe ya. Ekwela na ngwongwo i nwere na-akara aka maka naanị gị ... Mee dị ka ụwa, mmadụ; na-amị mkpụrụ, dị ka ya; akala ihe siri ike karịa ihe na-adịghị ndụ. Ala anaghị acha n'onwe ya ka mkpụrụ osisi rie ya, kama ọ bụ ka ijere gị ozi. Ma gị onwe gị, ọ bụ gị na-aghọrọ mkpụrụ nke mmesapụ aka gị, ka ụgwọ ọrụ nke omume ọma laghachiri ndị mere ha. I nyewo ndi agu nāgu nri; ihe i nyere na-alọghachikwute gị, were ya na mmasị.
Dika nkpuru sitere na nkpuru, n thenye onye nāgha nkpuru-ya nkpuru, otú a ka achicha an givennye onye agu nāgu ka iwere urù riri nne. Ya mere, mgbe oge owuwe ihe ubi rutere n’ụwa, ọ bụ oge ka unu ga-agha mkpụrụ n’ebe ahụ, n’eluigwe: “Ghaaranụ onwe unu ezi omume” (Hos 10,12:22,1). Gịnị kpatara oke nsogbu? Kedu ihe kpatara nchegbu na nchegbu iji mechie akụ gị n'azụ ngwa agha na brik? “Ezi aha bara uru kari oke akụnụba” (Ilu XNUMX).
← Na post gara aga Gara aga post:Ndị isi Vatican abụọ binyere aka na nkwekọrịta iji rụkọta ọrụ na ọgụ megide nrụrụ aka
Ọzọ Post → Post ozo:Nsọpụrụ Chineke: Bara Uru Karịsịa